Indlwana Eqinile - isiqephu sendlu yasemapulazini - I-Airbnb
Indlwana Eqinile - isiqephu sendlu yasemapulazini
Warwickshire, Banbury, i-United Kingdom
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Aga 30.
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe esanda kulungiswa, isitezi sokuqala, enesithasiselo esizimele endlini eyakhiwe ngamapulazi yekhulu le-18. Indlu nezingadi, ngaphambilini futhi zaklanywa ngu-Thomas Thomas, umklami wezingubo zokugqoka ku-HM the Queen, zitholakala e-Sutton Under Brailes futhi zibukeka kahle kakhulu.
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Feldon Valley Golf ne-Cotswold Gin Distillery, amasevisi amaningi amamayela angu-1 kude e-Brailes, imizuzu engu-20 ukusuka e-Daylesford Farm, imizuzu engu-20 ukusuka esitolo se-Diddly Squat Farm.
Lena indawo enethezekile nevulekile yekamelo lokulala elilodwa, ingxenye enamapulazi ethu, enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. Isanda kulungiswa, ihlanzeke kakhulu futhi ikhaphethi kuyo yonke i-. Kwezinye izimo singathanda ukwamukela izinja, sicela uxhumane nami kuqala ukuze nixoxisane.